Dowlada Somalia iyo ganacsatada oo gargaar lacageed uga qeyb qaadanaya fatahaada ka… – Hagaag.com
Dowlada Somalia iyo ganacsatada oo gargaar lacageed uga qeyb qaadanaya fatahaada ka…
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday Gargaar lacageed oo ay uga qeyb qaadaneyso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay Fatahaadda uu sameeyay Wabiga Shabeelle.
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa shaaca ka qaaday in dowladdu ay dadka walaalahood ah ugu deeqday Lacag dhan 500,000 (shan boqol oo kun oo dollar) taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay fatahaaduhu saameeyeen.
Wasiir Maareeye ayaa tibaaxay in Madaxweynaha, Gudoomiyeyaasha Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka sare iyo Ra’iisul Wasaaaha dalka ay mushaarkooda bisha October ugu deeqeen dadka Soomaaliyeed ee ay fataaduhu saameeyeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay in ay ka gaabisay wax u qabashada dadka ku barakacay fatahaada ku dhufatay qeybo ka mid ah dalka, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo Boqolkiiba Sagaashan dadkii ku noolaa ay dibadda uga baxeen daadad ku soo rogmaday guryihiin ay xaafaddihii ay ku noolaayeen.
Dhinaca kale Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan uu soo qaban qaabiyay Rugta ganacsiga Soomaaliyeed, kaasoo yabooh dhaqaale loogu uruurinayay dadka uu saameeyay Fatahaadaha Wabiyada Jubba iyo Shabelle, iyadoo dhibta ugu daranna ay gaartay dadka ku nool magaalada Beledweyne.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa balanqaaday in wajiga hore ee gurmadka ay uga qeyb qaadanayaan $1,000 000 (Hal Milyan oo Doolar), waxeyna sheegeen iney haatan gacanta ku hayaan 630 Kun oo Doollar, todobaadyadana ay iska soo uruurinayaan inta Halka Milyan ka hartay oo ah 370 Kun oo Doolar.
Ganacsatada Suuqyada Bakaaro iyo Suuq Bacaad, ayaa balanqaaday iney iyaga iska soo uruurinayaan lacagta hartay, si deg deg loogu gaarsiiyo dadka u baahan ee ay saameysay Fatahaadaha Wabiyada.
Guddoomiyaha Rugta ganacsiga Soomaaliyeed C/Kariin Gabeyre, ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay Fatahaadahan, wuxuuna Ganacsatada faray iney kaalin ka qaataan dadaalada socda ee loogu gurmanayo dadka uu saameeyay Fatahaadaha.